Igundane eliyiqhawe lase Afrika liwine indondo yegolide | Scrolla Izindaba
Igundane eliyiqhawe lase Afrika liwine indondo yegolide
Igundane elikhulu laseAfrika linikezwe indondo yegolide ngomsebenzi walo wokusindisa izimpilo zabantu ngokuthola amabhomu agqitshwayo.
I-BBC ibika ukuthi igundane, uMagawa, selihogele amabhomu agqitshwayo angama-39 kanye nemishini engu-28 selokhu laqala lo msebenzi.
Inhlangano esiza umphakathi yaseBrithani i-PDSA inikeze leli gundwane indondo ngomsebenzi walo wokusindisa impilo e-Cambodia, lapho kunezimayini ezingafika ezigidini eziyisithupha.
UMagawa, oneminyaka eyisikhombisa ubudala, ungowase-Tanzania.
Waqeqeshwa yinhlangano esiza abantulayo i-Apopo yase-Belgium eqeqesha amagundane, abawabiza ngokuthi ama-HeroRATS, ukuthola imayini nezifo sofuba.
Ukuqeqeshwa kuthatha unyaka owodwa.
UMagawa uyakwazi ukusesha inkundla elingana nenkundla yokudlala ithenisi, athole amabhomu agqitshiwe ngemizuzu engama-20 nje kuphela.
Abe-Apopo bathi lokhu kungathatha umuntu osebenzisa umshini wensimbi izinsuku ezine.